EMEA region မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ HTC U11 ရဲ့ Android Oreo Update! – AsiaApps
January 10, 2018 January 15, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on EMEA region မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ HTC U11 ရဲ့ Android Oreo Update!
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တုန်းက HTC အနေနဲ့ Europe မှာ Oreo Update ကိုသတ်မှတ်ချိန်ထက်နောက်ကျသွားတာကြောင့် Twitter မှာတောင်းပန်စကားပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ Asiaapps website မှာမနေ့ကပဲ ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်းပန်စကားပြောခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်နေ့ကစပြီး တစ်ပတ်မပြည့်ခင်အချိန်အတွင်း မှာပဲ Europe, the Middle East and Africa (EMEA) region ကို Oreo Update ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ System update ထွက်ရှိလာပြီး 1.31 GB နဲ့ Download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ HTC Fan တစ်ဉီးဖြစ်သူရဲ့ Twitter post ကနေသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။
EMEA ကတော့ U11 အတွက် Oreo Update ရရှိတာနောက်ဆုံး region ပဲဖြစ်ပါတယ်။ U11 အတွက် Oreo Update ထွက်ရှိထားပြီးပြီဆိုတော့ မကြာခင်အချိန်မှာပဲ U ultra နဲ့ HTC 10 တို့အတွက် Oreo Update ကိုစောင့်မျှော်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Android, HTC, Oreo Update